बरुण, कट्रिना, ज्याक्लिन र वाणीको नयाँ सिनेमा ! « THE CINEMA TIMES
बरुण, कट्रिना, ज्याक्लिन र वाणीको नयाँ सिनेमा !
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – कोरियोग्राफर तथा निर्देशक रेमो डिसुजाले निर्देशन गर्ने आगामी अनटाइटल सिनेमामा बरुण धवन र कट्रिना कैफ अनुबन्धित भएको खबर बाहिरिएको छ । भारतीय मिडिया कोइमोईका अनुसार सिनेमाका तिन ‘प्रिन्सिपल क्यारेक्टर’ मध्ये यी दुई बलिउड ‘ए-लिस्टेड’ कलाकार फाइनल भएका हुन् । अर्को एक भूमिकामा भने ज्याक्लिन फर्नान्डिज र वानी कपूरसँग कुरा भैरहेको छ । यी दुई मध्ये एक जनालाई सिनेमाको लागि कम्फर्म गरिनेछ ।
सिनेमाको अफिसियल घोषणा भने १९ मार्चमा हुँदैछ । तर, भारतीय सिनेमाको इतिहासमै महँगो बजेटमा निर्माण हुन् लागेको डान्स जानराको सिनेमा केहि महिनादेखि चर्चामा छ । रेमो अहिले सिनेमा ‘रेस ३’को छायाँकनको क्रममा थाइल्याण्डमा छन् । जुन सिनेमामा रेमोले सलमानलाई एक्सनकट भनिरहेका छन् ।
थ्रीडीमा समेत निर्माण हुने अनटाइटल प्रोजेक्टको अहिले प्रिप्रोडक्सनको काम चलिरहेको छ । २०१९ को जनवरी/फेब्रुअरी तिरबाट छायाँकनमा जाने सिनेमालाई ०१९ कै ८ नोभेम्बरलाई रिलिज मिति तय गरिएको छ । सिनेमामा कोरियोग्राफर धर्मेश येलान्ड़ेको पनि मुख्य भूमिका रहनेछ ।